Navotsotry Ny Tajikistana Ilay Mpitoroka Saingy Mbola Manaraka Ihany Ny Fanamelohana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2018 5:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, ਪੰਜਾਬੀ, Ελληνικά, English
Khayrullo Mirsaidov. Sary nalain'i Antuan Veselov.Be mpizara indrindra.
Fitsarana iray tao Tajikistana no nilefitra tamin'ny tsindry iraisam-pirenena nahazo azy ka namotsotra mpanao gazety iray mpitoroka (mpamoaka tsiambaratelo) izay efa voaheloka higatra 12 taona an-tranomaizina tany aloha tany.
Tamin'ilay fanapahankevitra tsy nampoizina, namoaka didy ny Fitsarana ao amin'ny faritra Sughd fa havotsotra ny 22 Aogositra i Khairullo Mirsaidov na dia mbola manankery aza ny fiampangana azy tamin'ny fanodinkodinam-bola, ny fanaovana antontan-taratasy hosoka sy ny fijoroana ho vavolombelona mandainga.
Ny mpisolovava an'i Mirsaidov, Bakhtiyor Nasrulloyev, no nilaza tamin'ny masoivohom-baovao Asia-Plus fa mbola tsy maintsy mandoa onitra 80.000 somoni (8500 dolara) ny olona arovany, manao asa fanompoana ho tombontsoan'ny fiarahamonina ary mandoa ny ampahadimin'ny karamany ho an'ny Fanjakana mandritra ny roa taona.
Io fihetsika famindrampo io — izay saika tsy fahita mihitsy eo amin'ny rafi-pitsarana zara raha miverin-dàlana aminà raharaha tena idiran'ny politika lalina – dia toa valin'ny fiarahamientan'izao tontolo izao nateraky ny zavatra nanjo an'i Mirsaidov. Tena nisy fiantraikany be tokoa teo amin'ireo filazam-baovao sosialy ilay tenifototra #FreeKhayrullo (Avotsory i Khayrullo), ary noraisin'ny Masoivoho Britanika tao Tajikistana mihitsy aza.
Nanomboka tamin'ny fifanandrinana teo amin'i Mirsaidov sy ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny faritr'i Sughd io tantara io. Ny volana Novambra, namoaka taratasy mivelatra ho an'ny Filoha Emomali Rahmonny ilay mpanao gazety, sady mpitarika tropy mpanao hatsikana malaza, nanazava tamin'ny antsipirihany ny momba ireo fifandonana sy ireo fiampangàna kolikoly.
Kanefa ny 5 Desambra, i Mirsaidov izy tenany indray no nosamborina. Na dia tsy loza mitatao mivantana ho an'ny vahoaka aza izy, dia notànana am-ponja ary najanona any mandraka ankehitriny.
Nilaza ireo mpanohana azy fa noforonina ary tsy marimpototra ny fiampangana rehetra natao azy.
Nifangaroharo be ihany ny valintenin'ireo mpiaro zon'olombelona tamin'ilay famotsorana an'i Mirsaidov. _Raha misy ny fahafahampo hoe tsy hotanàna am-ponja intsony izy, ny zavamisy dia noraisina tamin'alahelo ny mbola nitànana ny fanamelohana azy.
Tsara homarihana fa ny fahalinan'ny besinimaro no isan'ny nahazoany fahafahana. Talohan'ny fanamelohana azy ny volana Jolay, nangingina ny vondrona diplaomatika iraisam-pirenena. Nanambara ireo diplaomaty tandrefana ao Azia Afovoany fa mahomby kokoa ny fifampiraharahana ambony latabatra noho ny fifanolanana ampahibe maso, fa toa tena nanohina tsy nahafa-po ny maro tamin'izy ireo ilay sazy 12 taona an-tranomaizina.
Avy hatrany taorian'ilay didy, namoaka fanambarana niraisana ny masoivohon'ny Royaume-Uni, Alemaina, Frantsa, Etazonia sy ny Solontenan'ny Vondrona Eoropeana ao Tajikistana, nanameloka ilay didy ho “faran'izay mafy”, tsy mifanaraka amin'ireo fiampangana akory. Mbola mampanahy koa ny amin'i Dushanbe, nosoritsoritan'ireo masoivoho ireo fa mety hisy fiantraikany mivaingana henjakenjana ny vokatr'izany.
“Manahy izahay fa io sazy io no hanimba ny tolona iombonantsika ho amin'ny fahaiza-mitantana, ka hampisy aloka eo amin'ny fiarahamiasantsika,” hoy ny voalazan'ilay fanambarana nataon'izy ireo.
Mazava ho azy fa tsy nampoizin'ireo manampahefana Tadjik mihitsy ny hatezerana toy izany ka nahatonga azy ireo hanohitra tamin'ny fiarovantenany aloha. Nampitombo avo roa heny ny famoretana ny haino aman-jery koa izy ireo tamin'ny fandrahonana ireo mpanao gazety izay mikasa handrakotra ilay raharaha.
“Ny fifanakalozankevitra sy ny fanakianana ilay didim-pitsarana nataon'ny haino aman-jery dia mety heverina ho toy ny fanevatevana ny fitsarana sy fanitsakitsahana ny etikan'ny fanaovana gazety”,hoy ny fanambarana navoakan'ny biraon'ny lehiben'ny fampanoavana.
Fanentanana maro hafa vao tsy ela tao amin'ny tambajotra sosialy ihany koa no nisy fiantraikany tsy nampoizina nitovy tamin'izany.
Niteraka korontana be ny fanakànana ilay zaza efatra taona narary mafy, zafikelin'i Muhiddin Kabiri, mpitarika nalefa sesitany avy amin'ny Islamic Renaissance Party of Tajikistan, na ny IRPT (Antoko Fahaterahana vaovao Islamika ao Tajikistana) tsy hahazo hivoaka ny firenena mba hitsabo tena maika noho ny homamiadana mahazo azy, niteraka hatezerana faobe. Toy ny sazy omen'ny governemanta an'i Kabiri no fahitàna an'ilay fandraràna tsy hivoaka. Niparitaka be tanaty aterneto ny fanangonantsonia alohan'ny nahazoan'i Hamza Tillozoda pasipaoro sy namelàna azy handray sidina hivoaka an'i Dushanbe.
Tranga iray mitovy amin'izany ihany koa, zazavavy 10 taona zanak'ilay mafana fo mpanohitra nalefa sesitany, Shabnam Khudoydodova, no nisy naka an-keriny ny 7 Aogositra rehefa iny izy handray fiaramanidina hitsidika ny reniny any Polonina iny. Vetivety ny fandraràna tsy hivoaka dia nofaritana ho toy ny fampijaliana mahatsiravina sy atosiky ny resaka politika hamelezana an'i Khudoydodova. Kanefa ho mariky ny fiovàna fanapahankevitra, navela hivoaka ny firenena ilay zazavavy andro vitsy taty aoriana.
Sarotra ny hamantatra raha mampiseho ny fikasan'ny governemanta hampitony ny fitondrantenany henjana sy tsy am-piheverana ataony amin'ireo mpanohitra rehetra ireny fisehoan-javatra ireny. Ny tena fitsapana dia ho avy amin'ireo mpitarika ny IRPT nogadraina ireo,nogadraina noho ny fiampangana azy ireo ho mpiray tsikombakomba tamin'ilay fanonganam-panjakana izay tsy nisy akory tamin'ny volana Septambra 2015. Mbola tena henjana kokoa aza ny mahazo ilay mpisolovava Buzurgmehr Yorov voaheloka mandramaty, noho ny fiampangana azy izay eken'ny maro fa noforonina, ho valin'ny fahavononany hiaro ny IRPT eo anatrehan'ny fitsarana.
Honohono tsy voamarina no nilaza fa mihevitra ny hanome famotsoran-keloka gadra am-polony mahery mpikambana ao amin'ny IRPT ny governemanta raha manaiky izy ireo ny hitory ampahibe maso an’ i Kabiri, ilay mpitarika azy nandeha niaina an-tsesitany. Io loharanom-baovao io ihany no nanambara fa tsy nanaiky izany adivarotra izany ireo gadra.